कस्ले रोक्यो राप्रपालाई एक हुन ? पाहुना बोलाएर कार्यक्रम रद्ध - TV Annapurna
कस्ले रोक्यो राप्रपालाई एक हुन ? पाहुना बोलाएर कार्यक्रम रद्ध
November 12, 2018 November 12, 2018 Annapurna TV
राप्रपाका विभिन्न घटकबीच एकताका लागि छलफल भए पनि त्यसले अन्तिम रुप भने लिन सकेको छैन । आइतवार अध्यक्ष कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपति शमसेर राणा नेतृत्वको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)बीच निर्णायक हुने भनिएको वार्ता निष्क्रसविहिन भयो । बेलुका दुई अध्यक्षबीच काठमाडौंको एक होटलमा भएको वार्तामा चुनाव चिन्हका विषयमा कुरा मिल्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् । आइतवारको छलफलमा सबै कुरा टुङ्ग्याएर सोमबार दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रम समेत तय भएको थियो । त्यसैअनुसार निमन्त्रणासमेत भएको थियो ।
तर, आइतबार एकाएक एकता प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । आखिर किन यसरी विवाद आयो त ? निर्णायक भनिएको छलफलले एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रुप दिन नसक्नुलाई नेताहरुले ‘‘पुरातनवादी शक्तिको चलखेल बताएका छन् । चुनाव चिन्हमा कुरा नमिलेको भन्ने कुरा बाहिरी हल्ला मात्रै हो ।’’ राप्रपा प्रजातान्त्रिकका एक नेताले भने । पार्टी एकता हुन नसकेको बारेमा छलफल गर्न सोमबार राप्रपा प्रजातान्त्रिकको बैठक बस्ने भएको छ ।
खासमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिक बीच मात्रै भएपनि एकता आजै घोषणा गर्ने तयारी भएको थियो । डा प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी बीच पनि सहमति जुटेमा तीन वटै एक हुने तयारीमा भएपनि राणा र थापाबीच चुनाव चिन्हलाई लिएर विवाद भएको थियो ।
कार्यक्रमका लागि आइतबार गरिएको निम्तो अहिले धमाधम रद्ध भएको अतिथिहरुलाई जानकारी गराइरहेको समेत जानकारी गराए । राप्रपाका अध्यक्ष थापाले हदैसम्म लचकता अपनाउँदा पनि एकता प्रयास सफल नभएको आइतबार आफ्नो पार्टीको बैठकमा नेताहरुलाई जानकारी गराएको एक नेताले बताएका छन् । उनीहरुबीच संवैधानिक राजतन्त्र, चुनाव चिन्ह लगायतका विषयमा सहमति हुन नसकेको बाहिर बताइएको छ । तर, भित्रि कुरा भने बताइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगरिने, प्रवक्ताले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने
विद्यार्थी नेताको रिहाइको माग राख्दै नेविसंघले जलायो प्रधानमन्त्रीको पुत्ला